Translations by Russell Kyaw in “Burmese (my) translation of gim...” : Burmese (my) : Template “gimp20-tips” : Impish (21.10) : Translations : gimp package : Ubuntu
Translations by Russell Kyaw
Translations by Russell Kyaw in “Burm...
Russell Kyaw has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
GIMP ရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များ အများစုအတွက် အကြောင်းအရာ-အာရုံခံနိုင်တဲ့ အကူအညီကို F1 သော့ချက်ကို အချိန်မရွေး နှိုပ်ခြင်းဖြင့် သင် ရရှိနိုင်တယ်။ ဒီအရာဟာ စာရင်းမှတ်များ အတွင်းမှာလည်း အလုပ် လုပ်ဆေင်တယ်။
GIMP က သင့်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို စီစဉ်စေဖို့ အလွှာများကို သုံးတယ်။ ၄င်းတို့ကို စလိုက်များ (သို့) စစ်ထုတ် ကိရိယာများရဲ့ ဆင့်စီချက် တခု အဖြစ် မှတ်ယူပြီး ၄င်းတို့မှ တဆင့် ၄င်းတို့ရဲ့ အကြောင်းအရာများရဲ့ ပေါင်းစပ်မှု တခုကို သင်မြင်နိုင်တယ်။
အလွှာများ အညွှန်း စာမျက်နှာထဲက အလွှာတခုရဲ့ စာသား အမှတ်အသားပေါ် ညာဖက် နှိုပ်ခြင်းဖြင့် အလွှာ လည်ပတ်မှု အများအပြားကို သင် လုပ်​ဆောင်နိုင်တယ်။
ယန္တရားငယ်များ အများစုဟာ လက်ရှိ ရုပ်ပုံရဲ့ လက်ရှိ အလွှာမှာ အလုပ် လုပ်ကြတယ်။ အချို့ ကိစ္စများမှာ၊ ယန္တရားငယ်ကို ရုပ်ပုံ တခုလုံးမှာ သင် အလုပ်လုပ်စေချင်ရင် အလွှာများ အားလုံး (ရုပ်ပုံ→ပြေပြန့်တဲ့ ရုပ်ပုံ) ကို သင် ပေါင်းစပ်ဖို့ လိုတယ်။
အလွှာများ အညွှန်းစာမျက်နှာထဲက အလွှာရဲ့ အမည်တခုဟာ <b>bold</b>နဲ့ ​ပြသနေရင်၊ ဒီအလွှာမှာ အာဖာ-ချာနယ် တခု မရှိဘူး။ အလွှာ→ဖေါက်ထွင်းမြင်နိုင်မှု→အာဖာ ချာမယ် ပေါင်းထည့်မှုကို သုံးပြီး အာဖာ-ချာနယ် တခုကို သင် ပေါင်းထည့်နိုင်တယ်။
သက်ရောက်မှုများ အားလုံးကို ရုပ်ပုံများ အမျိုးမျိုးအားလုံးမှာ အသုံးမချနိုင်ဘူး။ ဒါကို မီးခိုးရောင်-စာရင်းမှတ်-ရေးသွင်းချက် တခုနဲ့ ပြညွှန်ထားတယ်။ ရုပ်ပုံ စနစ်ကို နီစိမ်းပြာ (ရုပ်ပုံ→စနစ်→နီစိမ်းပြာ) အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့၊ အာဖာ-ချာနယ် (အလွှာ→ဖေါက်ထွင်းမြင်နိုင်မှု→အာဖာ ချာနယ ပေါင်းထည့်မှု) တခု ပေါင်းထည့်ဖို့ (သို့) ၄င်းကို သင် ပြန့်ပြား (ရုပ်ပုံ→ပြန့်ပြားတဲ့ ရုပ်ပုံ) စေဖို့ လိုအပ်နိုင်တယ်။
ရွေးချယ်မှု တခုကို <tt>Alt</tt> ဒရွတ်ဆွဲချက်ကို သုံးပြီး သင် ချိန်ညှိ (သို့) ရွေ့ရှားနိုင်တယ်။ ဒီအရာက ၀င်းဒိုးကို ရွေ့ရှားစေရင်၊ သင့် ၀င်းဒိုး မန်နေဂျာက <tt>Alt</tt> သော့ချက်ကို သုံးစွဲနေပြီး ဖြစ်တယ်။ ၀င်းဒိုး မန်နေဂျာများ အများစုကို <tt>Alt</tt> သော့ချက်ကို လျစ်လျုရှုဖို့ (သို့) <tt>Super</tt> သော့ချက် ((သို့) "၀င်းဒိုး အမှတ်တံဆိပ်") ကို အစားထိုး သုံးစွဲဖို့ စီစဉ်ဖန်တီးနိုင်တယ်။
GIMP ထဲမှာ အရာ တော်တော်များများ သင် ဒရွတ်ဆွဲပြီး ချထားနိုင်တယ်။ ဥပမာ အားဖြင့်၊ ကိရိယာအိတ် (သို့) အရောင်စပ်​ ဆေးခွက်တခုမှ အရောင်တခုကို ဒရွတ်ဆွဲပြီး ရုပ်ပုံတခုထဲ ၄င်းကို ချထားခြင်းက လက်ရှိ ရွေးချယ်မှုကို အဲဒီ အရောင်နဲ့ ဖြည့်စေလိမ့်မယ်။
ရုပ်ပုံ ပတ်လည်ကို ရိုက်ဖို့ ကြွက်အလယ် ခလုတ်ကို သင် သုံးစွဲနိုင်တယ် ((သို့) ကြွက်ခလုတ်ကို ရွေ့ရှားနေစဉ် <tt>Spacebar</tt> ကို ချင့်ချိန်ပြီး ထိန်းထားပါ)။
ရုပ်ပုံတခုပေါ် လမ်းညွှန်တခု ချထားဖို့ ပေတံတခု ​အပေါ် နှိုပ်ပြီး ဒရွတ်ဆွဲပါ။ ဒရွတ်ဆွဲတဲ့ ရွေးချယ်မှုများ အားလုံးဟာ လမ်းညွှန်များထံ ကူးသွားလိမ့်မယ်။ လမ်းညွှန်များကို ရွှေ့​လျားကိရိယာ သုံးပြီး ရုပ်ပုံမှ ၄င်းတို့ကို သင် ဒရွတ်ဆွဲထုတ်နိုင်တယ်။
အလွှာတခုကို အလွှာများ အညွှန်းစာမျက်နှာမှ သင် ဒရွတ်ဆွဲနိုင်ပြီး ၄င်းကို ကိရိယာအိတ်ထဲ ချထားနိုင်တယ်။ ဒီအရာက အဲဒီအလွှာပဲ ပါရှိတဲ့ ရုပ်ပုံ အသစ်တခုကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။
မျောနေတဲ့ ရွေးချယ်မှု တခုကို ရုပ်ပုံအပေါ် အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များ မပြုလုပ်ခင် အလွှာသစ် (သို့) နောက်ဆုံး သက်ကြွတဲ့ အလွှာ တခုဆီ ချိတ်တွယ်ထား ရမယ်။ အလားတူ လုပ်ဆောင်ဖို့ အလွှာများ အညွှန်းစာမျက်နှာထဲမှ &quot;အလွှာသစ်&quot; (သို့) &quot;ကျောက်ဆူး အလွှာ&quot;ပေါ် (သို့) စာရင်းမှတ်များ သုံးစွဲပြီး နှိုပ်ပါ။
GIMP က ပြေးလွှားရင်း gzip ဖိသိပ်မှုကို ပံ့ပိုးထားတယ်။ သင့် ဖိုင်အမည်မှာ <tt>.gz</tt> ကို ((သို့) သင့်မှာ bzip2 ကို တပ်ဆင်ထားရင်၊ <tt>.bz2</tt>) ပေါင်းထည့်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို ဖိသိပ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မယ်။ အမှန်ပဲ ဖိသိပ်ထားတဲ့ ရုပ်ပုံများ ဖွင့်ပြမှုလည်း အလုပ်ဖြစ်တယ်။
ရွေးချယ်မှု တခုကို မပြုမီ <tt>Shift</tt> ကို ဖိပြီး ထိန်းထားခြင်းဖြင့် လက်ရှိ ရွေးချယ်မှုဆီ အစားထိုးမဲ့အစား ​သင့်ကို ပေါင်းထည့်​စေတယ်။ ရွေးချယ်မှုတခုကို မပြုမီ <tt>Ctrl</tt> ကို သုံးစွဲခြင်းက လက်ရှိ အချက်ကို နှုတ်ယူစေတယ်။
တည်းဖြတ်→မှတ်သားချက် ရွေးချယ်မှုကို သုံးပြီး ရိုးရိုး စတုရန်းပုံများ (သို့) စက်ဝိုင်းများကို သင်ရေးဆွဲနိုင်တယ်။ ၄င်းက သင့်ရဲ့ လက်ရှိ​ ရွေးချယ်မှုရဲ့ အစွန်ကို မှတ်သားပေးတယ်။ ပိုမို ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်များကို လမ်းကြောင်း ကိရိယာ (သို့) စစ်ထုတ်ကိရိယာများ→တင်ဆက်မှု→Gfig ကို သုံးပြီး သင် ရေးဆွဲနိုင်တယ်။
လမ်းကြောင်းတခု (လမ်းကြောင်းကို တည်းဖြတ်→မှတ်သားပါ) ကို သင် မှတ်သားရင်၊ ရေးဆွဲ ကိရိယာများကို ၄င်းတို့ရဲ့ လက်ရှိ တပ်ဆင်ချက်များနဲ့ သုံးစွဲနိုင်တယ်။ ရောင်စဉ်တန်း စနစ်ထဲက ပုံဆွဲစုတ်တံ၊ ခဲဖျက် (သို့) မင်ပျံ့ကိရိယာကို သင် သုံးစွဲနိုင်တယ်။
လမ်းကြောင်း ကိရိယာကို သုံးပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ ရွေးချယ်မှုများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး တည်းဖြတ်နိုင်တယ်။ လမ်းကြောင်းများ အညွန်းစာမျက်နှာက လမ်းကြောင်း အများအပြားမှာ လုပ်ဆောင်ပြီး ၄င်းတို့ အားလုံးကို ရွေးချယ်ချက်များဆီ အသွင်ပြောင်းဖို့ သင့်ကို အခွင့်ပေးတယ်။
ရွေးချယ်မှုကို ပြောင်းလဲဖို့ ရေးဆွဲ ကိရိယာများကို သင် သုံးစွဲနိုင်တယ်။ ရုပ်ပုံ ၀င်းဒိုး တခုရဲ့ အောက်ခြေ ဘယ်ဖက်မှ &quot;အမြန် မျက်နှာဖုံး&quot; ခလုတ်ပေါ် နှိုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ရုပ်ပုံမှာ ရွေးဆွဲခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ၄င်းကို သာမန် ရွေးချယ်မှု တခုဆီ ပြန် အသွင်ပြောင်းဖို့ ခလုတ်ကို ပြန်နှိုပ်ပါ။
ရွေးချယ်မှု တခုကို ချာနယ် တခုထဲမှာ သင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးနောက် ဒီချာနယ်ကို ရေးဆွဲ ကိရိယာ တခုခုဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်တယ်။ ချာနယ်များ အညွန်းစာမျက်နှာထဲမှာ ခလုတ်များကို သုံးပြီး၊ ဒီ ချာနယ် အသစ်ရဲ့ မြင်ကွင်းကို သင် ထိန်းနိုင် (သို့) ၄င်းကို ရွေးချယ်မှု တခုထဲ အသွင်ပြောင်းနိုင်တယ်။
ဦးစားပေးချက်များ အညွန်းစာမျက်နှာထဲမှာ &quot;တက်ကြွသော ကီး​ဘုတ် ဖြတ်လမ်းများ&quot;ကို သင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ဖြတ်လမ်း သော့ချက်များကို သင် ပြန်သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ စာရင်းမှတ်ကို ထွက်ပေါ်စေဖို့၊ စာရင်းမှတ် အချက်တခုကို ရွေးချယ်မှုနဲ့၊ နှစ်သက်တဲ့ သော့ချက် အစု​အဝေးကို နှိုပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါ။ &quot;ကီးဘုတ် ဖြတ်လမ်းများကို သိမ်းဆည်းပါ&quot;ကို ဖွင့်ထားရင်၊ GIMP ကို သင် ထွက်ခွါတဲ့ အခါ သော့ချက် ချည်နှောင်ချက်များကို သိမ်းထားတယ်။ ဖြတ်လမ်းများကို အမှတ်တမဲ့ သတ်မှတ်ခြင်းပြန်သတ်မှတ်ခြင်းကို တားဆီးဖို့ &quot;တက်ကြွတဲ့ ကီးဘုတ် ဖြတ်လမ်းများ&quot;ကို ဆက်ပြီး သင် သေသေချာချာ ပိတ်ထားသင့်တယ်။
သင့်ရဲ့ ဖန်သားပြင်ဟာ စုပြုံလွန်းနေရင်၊ ကိရိယာအိတ်နဲ့ အခြား အညွှန်းစာမျက်နှာများရဲ့ မြင်ကွင်းကို ထိန်းဖို့ ရုပ်ပုံ ၀င်းဒိုး တခုထဲက <tt>Tab</tt> ကို သင်နှိုပ်နိုင်တယ်။
<tt>Shift</tt>-မျက်လုံး ပုံသင်္ကေတ တခုကလွဲလို့ အလွှာများ အညွှန်စာမျက်နှာ အားလုံးကို ဖျောက်ဖို့ ၄င်းပုံသင်္ကေတကို နှိုပ်ပါ။<tt>Shift</tt>-အလွှာများ အားလုံးကို ပြသဖို့ ပြန်နှိုပ်ပါ။
<tt>Ctrl</tt>-အလွှာများ အညွှန်း စာမျက်နှာထဲမှ အလွှာ မျက်နှာဖုံးရဲ့ အစမ်းမြင်ကွင်းပေါ်မှ နှိုပ်ချက်က အလွှာ မျက်နှာဖုံးရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ထိန်းပေးတယ်။ <tt>Alt</tt>-အလွှာများ အညွှန်းစာမျက်နှာထဲမှ အလွှာ မျက်နှာဖုံးရဲ့ အစမ်းမြင်ကွင်းပေါ် နှိုပ်ချက်က မျက်နှာဖုံးကို တိုက်ရိုက် ရှုမြင်ခြင်းကို ထိန်းပေးတယ်။
ရုပ်ပုံ တခုထဲက အလွှာများ အားလုံးကို ဝိုင်းရံဖို့ <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> ကို သင် သုံးစွဲနိုင်တယ် (အဲဒီ ​ခလုတ်များကို သင့်ရဲ့ ၀င်းဒိုး ​မန်နေဂျာက မချည်နှောင်ထားရင်)။
<tt>Ctrl</tt>-အနီးကပ်မြင်ကွင်း အရောင် အစား နောက်ခံ အရောင်ကို သုံးစွဲစေဖို့ ဆွဲပုံးဖြည့် ကိရိယာနဲ့ နှိုပ်ပါ။ အလားတူ၊ <tt>Ctrl</tt>-မျက်စည်းခတ်ကိရိယာနဲ့ နှိုပ်ချက်က အနီးကပ်မြင်ကွင်း အရောင် အစား နောက်ခံ အရောင်ကို သတ်မှတ်ပေးတယ်။
<tt>Ctrl</tt>-လှည့်ပတ်ကိရိယာနဲ့ ဒရွတ်ဆွဲချက်က လှည့်ပတ်မှုကို ထောင့် ၁၅ ဒီဂရီအထိ ဖျစ်ညှစ်ပေးလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ အချို့ စကင်ဖတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများဟာ အရောင်ပါ၀င်မှု မလုံလောက်ရင်၊ အဆင့်များ ကိရိယာ (အရောင်များ→အဆင့်များ) ထဲက &quot;အလိုအလျှောက်&quot; ခလုတ်နဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ အရည်အသွေး အတိုင်းအတာကို အလွယ်တကူ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ ​အရောင် ချထားမှု တခုခုရှိရင်၊ ၄င်းတို့ကို မျဉ်းခုံးများ ကိရိယာ (အရောင်များ→အဆင့်များ)နဲ့ ပြုပြင်နိုင်ဘူး။